SPDC – democracy for burma
Retired Burmese Sen-Gen Than Shwe donates jewels to Buddha’s tooth relic
On November 24, 2011 November 24, 2011 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
Chiang Mai (Mizzima) – Former Burmese junta leader Snr-Gen Than Shwe disappeared from public view after the opening of Parliament in March, but his name was mentioned in state-run newspapers on Thursday for the first time.
Than Shwe and his family on Wednesday evening went to the Maha Pathana Cave in Gaba Aye Hill in Rangoon, to pay homage toatooth relic of the Buddha that is on display for public worship, according to reports in The New Light of Myanmar and The Mirror. The relic was sent to Burma from China for public display.
The retired general his wife, Kyaing Kyaing, and their family donated US $1,300 (about 1 million kyat), 11 rubies, Myeik pearl, andagolden ring [value 488,000 kyat], said reports on the newspapers’ inside pages.
The chairman of the now-defunct State Peace and Development Council (SPDC), Than Shwe dissolved the SPDC on March 30 2011, and transferred power to the civilian government led by President Thein Sein.
Donation or not you going to hell
KHRG-Villager Executed in Papun District
On November 23, 2011 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
Shan Leader Khun Tun Oo sentenced to 93 years imprisonment, removed from Putao in Kachin State to Taungoo
On November 16, 2011 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
Khun Tun Oo leader of the second largest winning party in the 1990 elections who had been sentenced to 93 years imprisonment in 2005, removed from Putao in Kachin State to Taungoo, 175 miles north of Rangoon today, saysasource close to the family. (SHAN)
Displacement in Eastern Burma 2011video Kwekalu
On November 12, 2011 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
KIO leader’s orange orchard burnt down by Burmese Army
Houses and huts in an orange orchard owned by Lt-Gen Nban La Awng, Vice-President of the Kachin Independence Organization (KIO) was burnt down on Tuesday evening by the Burmese Army, said eyewitnesses.
Hundreds of acres of the orange plantation along with non-commercial fish farms are located near Awng Ja village close to Ga Ra Yang village on the Myitkyina-Manmaw (Bhamo) Road in Waingmaw Township, about 36 miles south of Myitkyina, the capital of Kachin State.
The arson was perpetrated by Burmese Army troops from the Light Infantry Division No. 88 based in Magway, said KIA officers.
The Burmese Army soldiers also captured the Awng Ja post of KIA’s Light Infantry Division No. 254 and seizeda25mm machine gun, said eyewitnesses.
The KIA soldiers at the post withdrew after government troops resorted to indiscriminate shelling from heavy artillery, added eyewitnesses.
Jubilant Burmese troops celebrated on Wednesday in Ga Ra Yang after they burnt down the KIO leader’s orchard and seizedamachine gun, according to witnesses.
The former General Thein Sein led Burmese government is currently sourcing troops from over 100 battalions for the offensive against the KIA in Kachin State and Northern Shan State even as it talks about democratic reforms in the country.
ရွာတွင်းဝင်သည့် အစိုးရစစ်တပ် လူသတ်၊ ပစ္စည်းသိမ်းယူခဲ့ KIC
On November 10, 2011 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
နိုဝင်ဘာလ ၁၀ရက်။ စောခါးစူးညား (ကေအိုင်စီ)
ကရင်ပြည်နယ် လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်ရှိ ခလယ့်ဒေးစခန်းအခြေစိုက် မြန်မာအစိုးရ စစ်တပ် စကခ(၁၂)လက်အောက်ခံ ခမရ(၂၃၀) တပ်ရင်းသည် ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က ထိုဒေသရှိ ရွာသူကြီးတဦးကို ပစ်သတ်ကာ အရပ်သားပိုင် ပစ္စည်းများကိုလည်း အဓမ္မသိမ်း ယူမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ဗိုလ်မှူးကြီးသန်းထိုက်စိုး ဦးဆောင်သည့် အဆိုပါတပ်ရင်းသည် ပြီးခဲ့သည့် အောက်တိုဘာလ ၂၉ရက်နေ့က ထီးမကျုခီးရွာမှ အသက် ၃၆နှစ်အရွယ် ရွာသူကြီးဖြစ်သူ စောဖါးကော့ဆဲကို ပစ်သတ်ပြီး နားကပ်၊ လက်စွပ်နှင့်အတူ ထိုင်းဘတ်ငွေအချို့ကို သိမ်းယူခဲ့သည်။ ၎င်းအပြင် ကလေ့မိုခီးရွာမှ ရွာသားအချို့ကို ခိုင်းစေသည့်အပြင် ထိုင်းဘတ်ငွေ၊ ဆန်၊ စောင်၊ အချိုရည်၊ ငါးဗူး၊ လက်ကိုင်ဖုန်း စသည့်ပစ္စည်းများကိုလည်း သိမ်းယူခဲ့သည်ဟု ရွာခံအမျိုးသားတဦးက ကေအိုင်စီကို ပြောသည်။
“သူတို့(အစိုးရတပ်) ထီးမကျုခီးရွာထဲ ၀င်ပြီးပစ်တာ လက်နက်ကြီးပါ ပါတယ်။ ရွာသူကြီးသေပြီး ကျွဲတကောင်လည်း ဒဏ်ရာရ သွားတယ်။ အဲဒီရွာအပြင်ထွက်တဲ့အခါ KNU တပ်တွေ စောင့်ပစ်တော့ အနီးအနား ကလေ့မိုခီးရွာက လူတွေကို ခေါ်ပြီး ပစ္စည်း ထမ်းခိုင်းပြီး အရှေ့သွားခိုင်းတယ်။ အဲဒီရွာသားတွေရဲ့ ပစ္စည်းအချို့ကိုလည်း သိမ်းသွားတယ်။”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ထိုနေ့တွင်ပင် ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်-KNLA ဗိုလ်ဒိငါး ဦးဆောင်သည့် တပ်ရင်း(၂၂)မှ အစိုးရစစ်တပ် ကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ အစိုးရတပ်မှ ၂ဦး ကျဆုံးပြီး ၁၂ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။
မြန်မာအစိုးရ စစ်တပ်သည် ပစ်သတ်ခံရသူ ရွာသား၏ နေအိမ်မှ ရွှေနားကပ် ၆စုံ၊ ရွှေလက်စွပ် ၁ကွင်းနှင့်အတူ ထိုင်းငွေ ဘတ် တစ်သောင်းကို သိမ်းယူခဲ့ပြီး ကလေ့မိုခွီးရွာမှ ရွာသားများ၏ ထိုင်းဘတ်ငွေ ၇ထောင်ကျော်၊ အိမ်သုံးပစ္စည်းနှင့် အစားအစာများ ကို အဓမ္မသိမ်းယူခဲ့သည်ဟုလည်း အဆိုပါဒေသခံရွာသားက ထပ်မံ ပြောဆိုသည်။
၎င်းအပြင် ထီးမကျုခွီးရွာသားကို ပစ်သတ်ခဲ့ပြီးနောက် ထိုရွာရှိ လူနေအိမ်များမှ ၀ါး ပျဉ်ပြားအခင်းများ၊ ထမင်းအိုးများ၊ ၀ါးကျည် တောင့် စသည့်အိမ်တွင်းပစ္စည်းများကို ပြန်အသုံးပြု၍ မရအောင် အစိုးရစစ်တပ်မှ ထိုးဖောက်ဖျက်ဆီးခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
Photo-KIC (စစ်တပ်မှ ဖျက်ဆီးခဲ့သည့် ရွာသားများ၏ပစ္စည်းများ)
ကလေ့မိုခီးရွာမှ အစိုးရတပ်၏ အဓမ္မပစ္စည်း အသိမ်းခံရသူများမှာ နော်မုပရီး ၇၀နှစ်၊ နော်ဖီးအဲ့ ၅၂နှစ်၊ စောတေ့လယ့် ၄၁နှစ်၊ နော်မုထူး ၃၈နှစ်၊ နော်မခင်ရွှေ ၄၀နှစ်၊ နော်မရွေ ၃၈နှစ်၊ နော်တုတူး ၄၀နှစ်၊ နော်ဟဲလှ ၄၀နှစ်၊ စောထုဟဲ ၃၆နှစ်၊ စောဖါးနိုး ၃၅နှစ်၊ နော်မုအောင် ၂၈နှစ်၊ နော်ဖောခု ၂၉နှစ်၊ စောပွယ်ဖိုး ၄၀နှစ်၊ နော်မြဖော ၃၅နှစ်၊ နော်မုခူး ၆၀နှစ်နှင့် စောဖါးဒါးဖိုး ၂၆နှစ်တို့ ဖြစ်သည်။
ကလယ့်ဒေးအခြေစိုက် မြန်မာအစိုးရတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် ထိုဒေသရှိ ထီးမကျုခီး၊ ငါးကြပ်ကွင်း၊ ထီးတိုကော်၊ ကလေ့မိုးခီး၊ ကလေ့မိုထာ့ စသည့်ကျေးရွာများတွင် သွားလာလှုပ်ရှားလျှက်ရှိသည်ဟု သိရသည်။
ကချင်ပြည်နယ် တိုက်ပွဲများအတွင်း ဒေသခံများ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံရ
On November 9, 2011 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
ကချင်ပြည်နယ် ၀ိုင်းမော်၊ မိုးမောက်နှင့် မန်စီမြို့နယ်များအတွင်း အစိုးရတပ်နှင့် ကချင်ပြည် လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် KIA တို့ တိုက်ပွဲများ ပြင်းထန်စွာ ဖြစ်ပွားနေပြီး အစိုးရတပ်က လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက် မှုများ ပြုလုပ် နေသည်ဟု ဒေသခံများက ပြောသည်။
၀ိုင်းမော်မြို့နယ် မုတ်ကြိတ်ကျေးရွာအတွင်း ယမန်နေ့နံနက်က တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး အစိုးရတပ်က ကျေးရွာအတွင်းမှ နေအိမ်တလုံးကို မီးရှို့လိုက်သလို အရပ်သားများအား ပစ်ခတ်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ သည်ဟု မြစ်ကြီးနားသို့ ထွက်ပြေးလာသည့် မျက်မြင် ဒေသခံ တဦးက အခုလို ပြောသည်။
“မနေ့က မနက် ၇ နာရီခွဲမှာ KIO ဖက်ကလာပြီးတော့ ဆယ်မိနစ်လောက် ပစ်တယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်း စစ်တပ်က ပြန်ပြီးမှ မိနစ်(၃၀) လောက် ပြန်ပစ်တယ်။ လက်နက်ကြီးတွေလည်း ပါတာပေ့ါ။ အဲဒီမှာ KIO ထွက်လာတဲ့ လမ်းဖက်က အိမ်ကိုတော့ မီးရှို့လိုက်တယ်။ ကျန်တာကတော့ အဲဒီဖက်က ထွက်ပြေးလာတဲ့ ယောကျာ်းလေးတွေကို ကြိုးနဲ့တုတ်တယ်၊ ရိုက်နက်တယ်။ တချို့ ပစ်ခတ်တယ်။”
တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုကြောင့် ၀ိုင်းမော်မြို့မှ တရုတ်ပြည်နယ်စပ် ဆဒုံးမြို့သို့ သွားသည့် ခရီးသွားများ ထွက်ပြေးသွားကြသော်လည်း အချို့ကို ပေါ်တာ အထမ်းသမားအဖြစ် ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွား သည်ဟု သိရကြောင်း ဆက်လက်ပြောဆိုသည်။
“အဲဒီမှာ ဆိုင်ကယ်တွေ ပစ်ထားပြီးတော့ အားလုံး ထွက်ပြေးကုန်ကြတယ်။ အရှေ့မှာသွားတဲ့ (၈) ယောက်အဖွဲ့ကတော့ အဖမ်းခံရပြီးတော့ ပေါ်တာ လုပ်ပေးရတယ်။ သူတို့ပစ်လိုက်တဲ့ အလောင်းတွေ တချို့ မသေတဲ့ဟာတွေကို ပြန်ထမ်းခိုင်းတယ်လို့ပြောတယ်။”
ထို့အပြင် ကျေးရွာဓလေ့အရ ကောက်သစ်စားပွဲ ပြုလုပ်ရန် ထမင်းထုတ် ယူဆောင်သွားသည့် ဒေသခံ အမျိုးသမီးများလည်း ရိုက်နှက်ခံခဲ့ရသည်ဟု ဆက်လက် ပြောဆိုသည်။
“မနေ့က အဲဒီမုတ်ကြိတ်ကျေးရွာက ကချင် ရိုးရာ ကောက်သစ်စားပွဲလည်း ကျရောက်တယ်လေ။ အဲဒီအချိန်မှာ ဒီဒေသခံ အဖွားကြီးတွေက ကောက်သစ်စားဖို့ ထမင်းထုတ်တွေကို ဘုရားရှိခိုး ကျောင်းမှာ ယူလာကြတာကိုး။ ပလိုင်းတွေထဲထည့်ပြီး ယူခဲ့ကြတာပေ့ါ။ အဲဒါ အဖွားကြီးတွေ ကိုလည်း ပါးရိုက်တဲ့သူရိုက်ခံရတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ သူတို့ မသင်္ကာတာက ဒီထမင်း ထုတ်တွေကို KIO ကို ပို့ဖို့ အဆင်သင့်လုပ်ထားတယ်ဆိုပြီး ရိုက်တယ်လို့ ပြောကြတယ်။”
တချိန်တည်းတွင် ၀ိုင်းမော်မြို့နယ် ဂါးရားယန်၊ ရွှေညောင်ပင် ဒေသတ၀ိုက်နှင့် နေရာအတော် များများတွင် ယမန်နေ့က တိုက်ပွဲများ ပြင်းထန်စွာ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟု KIO ဌာနချုပ် လိုင်ဇာမြို့ရှိ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF တပ်ဖွဲ့ဝင် ခေါင်းဆောင် တဦးက ပြောသည်။
ဗန်းမော်မြို့ခံ တဦးကလည်း မိုးမောက်မြို့နယ် အတွင်းရှိ ကျောက်စခန်း ကျေးရွာအနီးတွင် ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း တိုက်ပွဲများ နေ့စဉ်ဖြစ်ပွားနေပြီး ယနေ့နံနက်မှစ၍ လက်နက်ကြီး ပေါက်ကွဲသံများ ကြားရကြောင်း အခုလို ပြောသည်။
“ကျောက်စခန်းဖက်မှာတော့ နေ့တိုင်းလိုလိုပဲ လက်နက်ကြီးသံတွေ ကြားနေရတယ်။ လွယ်ဂျယ် တက်တဲ့လမ်းဖက်ပေ့ါ။ ကျနော်တို့က နည်းနည်း ဝေးတဲ့အခါကျတော့ လက်နက်ကြီးသံပဲ ကြားရတာပေ့ါ။ ညဖက်ဆိုရင် တနာရီခြားတခါလောက် ကြားနေရတယ်။ ဒီနေ့တော့ နေ့လည်ပိုင်း လည်း ကြားရတယ်။ ငါးမိုင် မန်ခွန်ဖက်မှာတော့ နေ့တိုင်းလိုပဲ ကြားနေရတယ်။”
ထို့အပြင် ယခုလ (၅) ရက်နေ့ကလည်း အစိုးရတပ်သားများကို တင်ဆောင်လာသည့် စစ်သင်္ဘော သုံးစီး ဧရာဝတီ မြစ်ကြောင်းမှ တဆင့် ဗန်းမော်မြို့သို့ ရောက်ရှိလာကြောင်းနှင့် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား နေသည့် ကျောက်စခန်း ကျေးရွာဖက်သို့ ထွက်ခွာသွားကြောင်း ဆက်ပြောသည်။
“တနေ့က သင်္ဘော သုံးစီးတက်ခဲ့တယ်။ အားလုံး စစ်သားချည်းပဲ တင်လာတာပေါ့နော်။ နောက်ပြီး အဲဒီညမှာပဲ ကိုးနာရီ ဆယ်နာရီလောက်ပေ့ါ။ အားလုံးမီးတွေ မိတ်ပြီးတော့မှ ကား(၁၉) စီး အစီး(၂၀) လောက် မိုးမောက်ဖက် တက်သွားတယ်။ အဲဒါ လိုင်ဇာသွားမလား မိုးမောက်တင်ဘဲလား ဆိုတာတော့ မသိဘူးပေ့ါ။”
အလားတူ တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ရှိ မျက်မြင် ဒေသခံတဦးကလည်း ယခုလ (၅)ရက်နေ့က ရှမ်းပြည်နယ် နမ့်ခမ်းမြို့နယ်ဘက်မှ အစိုးရတပ်သားများ တင်ဆောင်လာသည့် စစ်ထရပ်ကား (၈)စီး ကချင်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်စပ်ရှိ မန်ဝိန်းကြီး ကျေးရွာသို့ ထွက်ခွာသွားကြောင်း ပြောသည်။
ကချင်စစ်ပြေးဒုက္ခသည် အရေး ဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် တရုတ်မြန်မာနယ်စပ် အခြေစိုက် ကချင်အမျိုးသမီး အစည်းအရုံး KWAT အဖွဲ့မှ မိုင်းဂျာက လောလောဆယ်တွင် မန်ဝိန်းကြီး ကျေးရွာအတွင်းသို့ အရပ်သားများ ၀င်ရောက်ခွင့်ကို အစိုးရတပ်က ပိတ်ပင်ထားပြီး ကျေးရွာ အတွင်းမှ ထွက်ခွာခွင့်ကိုမူ ခွင့်ပြုထားသည်ဟု ပြောသည်။
သို့သော် ရွာသားများ အနေဖြင့် ကျေးရွာအတွင်းမှ ထွက်ခွာသွားရန် အခက်အခဲဖြစ်နေကြသည်ဟု
“ဘယ်သူဘဲ ဖြစ်ဖြစ် မန်ဝိန်းကြီး ရွာသားဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ၀င်လာလို့ မရဘူး။ အထွက်တော့ ရတယ်။ မန်ဝိန်းကြီးနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာရှိတဲ့ ရှမ်းရွာမှာတော့ KIA တွေ စခန်းချထားတယ်ဆိုတော့ တော်တော်လေး စိုးရိမ်ရတဲ့ အနေအထားရှိတယ်။ ရွာသားတွေအတွက်ကလည်း ဒုက္ခဘဲ။ ထွက်သွားရင်လည်း အိမ်ထဲမှာရှိရှိသမျှ အကုန်လုံး သူတို့(အစိုးရတပ်)က ယူသွားတော့ ရွာသားတွေကလည်း မထွက်သွားရဲကြဘူး။ နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်လာရင် သူတို့က ဓါးစားခံ ပြန်ဖြစ်ရော။” ဟု မိုင်းဂျာက ပြောသည်။
လောလောဆယ်တွင် အစိုးရတပ်က တပ်မ(၈၈)၊ (၆၆)၊ (၉၉) တပ်မ (၃) ခုဖြင့် KIO ဌာနချုပ် လိုင်ဇာသို့ ထိုးစစ်ဆင်ရန် ပြင်ဆင်နေပြီး ရေကြောင်း ကုန်းကြောင်းများမှ တပ်အင်အားများ ပို့ဆောင်နေသည်ဟု ABSDF တပ်ဖွဲ့ဝင် ခေါင်းဆောင်က ပြောသည်။
အစိုးရတပ်နှင့် KIO တို့ ဖြစ်ပွားနေသည့် တိုက်ပွဲများကြောင့် တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်တလျောက်နှင့် မြို့ပေါ်ဒေသများသို့ ထွက်ပြေးခိုလှုံနေသည့် စစ်ပြေး ဒုက္ခသည် သုံးသောင်းခန့် ရှိပြီး အချိန် ငါးလတာအတွင်း မိုးမောက်နှင့် မန်စီ မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများတွင် အစိုးရတပ်၏ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ထိခိုက် ဒဏ်ရာရသူနှင့် အဓမ္မပြုကျင့်ခံရသည့် ဖြစ်စဉ် (၂၈) ခုရှိ၍ အရပ်သား (၉) ဦးမှာ အပြစ်မရှိဘဲ ပစ်သတ်ခံရသည်ဟု (KWAT) အဖွဲ့၏ မှတ်တမ်းများကဆိုသည်။